Toetoetra 5 an'ny mpiady WWE ampiasaina amin'ny sarimihetsika Hollywood - Hafa
Toetoetra 5 an'ny mpiady WWE ampiasaina amin'ny sarimihetsika Hollywood
WweAry i Hollywood dia manana fifandraisana taloha ary maro ny mpiady toy izany izay lasa kintana Hollywood lehibe taty aoriana tamin'ny asany. Ary koa, hita fa ny ankamaroan'ireo mpihetsiketsika izay nifindra tany Hollywood avy tany WWE dia hita fa niasa tamin'ny sarimihetsika mihetsika fotsiny. Na dia samy hafa be aza ny tolona sy ny sarimihetsika dia manana fitoviana betsaka izy ireo.
vakio koa ity: 6 WWE Superstars Eva Marie dia tokony hitantana rehefa tafaverina any Raw
Hatreto, ireo superstar toa an'i Stone Cold, Hulk Hogan, The Rock, John Cena dia nanao ny asany tany Hollywood ary avelao izahay hilaza aminao, ireo mpiady izay nahomby tamin'ny fanaovana ny asany tany Hollywood, nanjary nahay tamin'ny sarimihetsika sy ny fahaiza-mitolona amin'ny tolona mifandraika amin'izany izy ireo. Huh. Ato amin'ity lahatsoratra ity, isika dia hanonona toetra tolona miisa 5 izay ilaina amin'ny sarimihetsika Hollywood.
5- Fampisehoana an-tsehatra amin'ny WWE Superstars
WWE na Professional Wrestling dia fampisehoana mampientam-po ary avelao aho hiteny aminao fa mila mamorona toetra amam-panahin'izy ireo ny mpiady ary manohy manangana izany mandritra ny asany. Tsy izany ihany fa manafy akanjo manokana ireo superstars hanohanana ny toetran'izy ireo ary koa hamoronana fihetsiketsehana sonia sy fifanakalozan-kevitra ho azy ireo. Rehefa manomboka miasa toy ny kintan'ny sarimihetsika ny mpihetsiketsika, afaka mihetsika izy ireo nefa tsy miala amin'ny toetrany.
vakio koa ity: Anjara asa lehibe 5 mety hisehoan'ny Undertaker ao amin'ny WWE amin'ny ho avy
Avelao izahay hilaza aminao fa tsy mila fahaizana manao fihetsika firy ny mpiady mba hiasa amin'ny sarimihetsika ary ny hetsika ataon'izy ireo dia ampy hahatonga ny sarimihetsika ho malaza. Ny angano WWE The Rock dia nampiasa ny fahaizany miady amin'ny sarimihetsika marobe toa ny Fast & Furious ary Rundown.
Ho an'ny vaovao lehibe rehetra mifandraika amin'ny WWE sy Wrestling, ary koa ny fanavaozana, valiny mivantana, ny Pejy Facebook Miondrana
maninona ny olona sasany no te ho irery
Afaka matoky azy ve aho indray
zavatra tokony hatao amin'ny bff-nao
manao sonia anao izy fa matahotra
rahoviana no tokony ho lasa irery ny fiarahana